हेलसिन्की संग्रहालय: विवरण र समीक्षा
फिनल्याण्ड भ्रमण गरेका धेरै यात्री, यो राज्य को राजधानी धेरै युरोपेली शहर, मूल वास्तुकला, एक विशेष स्कैंडिनेवियाई फ्लेयर र शान्ति र सौहार्द को एक अर्थमा फरक छ कि उल्लेख गरे।
जसले पहिलो पटक, शहर को असामान्य लेआउट गरेर हैरानी लागि भ्रमण हेलसिन्की पर्यटकहरु: समुद्र द्वारा पुग्नुहुन्छ, तपाईं सीढी पोत तुरुन्तै शहर को केन्द्र मा प्राप्त छ। हेलसिन्की मा संग्रहालयहरु को एक विशाल संख्या - त्यहाँ शहर गर्न uninitiated आगंतुकों प्रहार जो अर्को तथ्य छ।
फिनिश राजधानी विज्ञापन पुस्तिका वा पुस्तिका हेर्दै, तपाईंले आफ्नो आँखा विश्वास छैन - 80 संग्रहालयहरु मा। एक विशेष घटना वा युग समर्पित हेलसिन्की मा संग्रहालयहरु को सबै भन्दा, तिनीहरूले धेरै सानो आकार छ।
ललित कला को संग्रहालय
ठीक कला प्रेम फिनिश राजधानी मा ललित कला को संग्रहालय प्रदर्शन धेरै रोचक विषय देखाउनुहुन्छ भनेर थाहा हुनुपर्छ। यसलाई दुई भागमा हुन्छन्। पहिलो - टेनिस महल संग्रहालय, र दोस्रो - Meilahti संग्रहालय। यसलाई विभिन्न विषयहरू धेरै सालाना सञ्चालन गरिएको छ देखाउँछ।
सबै प्रदर्शन को भारी बहुमत तिनीहरूले दयालु संग्रहालय नै प्रदान जो canvases, बनाउन, तर संग्रहालय आफ्नै खर्च मा हुन्छ भनेर काम धेरै पनि छ। आज हेलसिन्की यो संग्रहालय सात भन्दा बढी र आधा हजार चित्रहरु निर्वाचकगण, एक विस्तृत प्रदर्शनी आगंतुकों प्रदान गर्दछ। तिनीहरूमध्ये Järnefelt, Simberg, हेलोनेन जस्ता प्रसिद्ध कलाकार द्वारा कामहरू छन्।
हेलसिन्की यो संग्रहालय शहर मा सबै भन्दा पुराना को छ। त्यहाँ "डिजाइन" को रूपमा यस्तो अवधि पनि थियो जब यो 1873 मा स्थापित भएको थियो। ती दिन, शहर शिल्प समाज अस्तित्व। त्यो यो भियना प्रदर्शनी मा डिजाइन वस्तुहरु सयौं खरिद गरेर संग्रहालय गरेको संग्रह लागि जग बसाल्यो। तिनीहरूले अनुग्रह र सौन्दर्य प्रेमीहरूको प्रशंसा जो, लागू कला को स्कूल मा अध्ययन विद्यार्थीहरूको लागि दृश्य एड्स, साथै प्रदर्शन थिए।
एक शताब्दी संग्रह लागि सार्थक डिजाइन प्रदर्शन हो। 1978 मा, संग्रहालय 1895 मा architect Nyustremom द्वारा निर्मित भवन, मा सारियो। यसलाई पार गर्न सक्छन् जो पछिल्लो शहर, एक वास्तविक मणि छ - मूल नव-gothic वास्तुकला र असामान्य डिजाइन तत्त्वहरू तत्काल देखें स्ट्राइकिङ्।
संग्रहालय को भूमि तल मा फिनल्याण्ड मा लागू गरियो कला को विकास को केन्द्रीय प्रदर्शनी हो। सबै प्रदर्शनी हल फरक बिषय हो: .. फर्नीचर र भित्री डिजाइन, tableware, सामान, हस्तशिल्प को अद्वितीय टुक्रा, आदि यो पनि पुरानो फोटो, रेखाचित्र, चित्रहरू, संसारमा सबै भन्दा प्रसिद्ध डिजाइनर भण्डारण गर्दछ को मोहरे।
दोस्रो तल्ला मा रुझान झल्काउने आधुनिक डिजाइन को उपलब्धिहरू देखाउन भनेर अस्थायी प्रदर्शनियों छन्। यहाँ आफ्नो originality मा हडताली छन् भनेर असामान्य वस्तुहरू भण्डारण छन्।
समकालीन कला प्रेमीहरूलाई लागि संग्रहालय
को अग्र-दल विशाल आकार भवन हेलसिन्की समकालीन कला को संग्रहालय घरों। यो XXI सताब्दी को कला र संस्कृति को एक बहुमुखी केन्द्र हो। को विशाल, विशिष्ट सजाया कोठा समकालीन कला को काम प्रदर्शनी कि बीस-पाँच ग्यालरीमा अवस्थित छ।
हेलसिन्की मा कला को संग्रहालय को यात्रा असामान्य हो: व्यक्तिगत अडियो पुस्तिका सँगसँगै। जो यो विशेष Multilanguage विद्युतीय उपकरण (5 भाषाहरू), तपाईं प्रस्तुत प्रदर्शन थाह प्राप्त गर्न सक्छन्। यो संग्रहालय आगंतुकों सहज रेस्टुरेन्ट, क्याफे र एक पुस्तकालय महसुस गर्न मद्दत गर्नेछ सबै कुरा छ।
तपाईं प्रकृति रुचि राख्नुहुन्छ भने, तपाईं त तपाईं निश्चित हेलसिन्की मा प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय भ्रमण गर्नुपर्छ ग्रह मा वनस्पति र जीव को विकास को इतिहास को रुचाउनु छन्। भ्रमणको एउटा मूल र मनोरंजक तरिका व्यवस्थित गरिएको छ। जहाँ आगंतुकों एक हात्ती को एक विशाल आंकडा द्वारा अभिवादन गर्दै प्रवेश, मा, तपाईं यसलाई crossword पहेली र पेन्सिल मुद्रण एक पात लिन प्रस्ताव गरिनेछ। सबै संग्रहालय पिटाई, तपाईं सबै प्रश्नहरू crossword प्रतिक्रिया बिस्तारै सक्षम हुनेछ।
संग्रहालय चार विषयगत खण्डहरू छन्। विशाल चासो को एक twinkle ठूलो उज्ज्वल तारा संग, अफ्रीका मा रात recreated जो, चिल्ला विदेशी चरा कोठा, एक विशाल Behemoth आफ्नो मुख खोल्दछ छ। कौशलतासाथ डायनासोर, चिप्लेकिरा को प्लास्टर casts गरे, हाम्रो ग्रह यी प्राचीन बासिन्दाहरू पूर्ण तस्वीर दिन्छ।
युवा आगंतुकहरुलाई प्रदर्शन केही pet गर्न सक्छन्, तर केवल ती जसको लागि त्यहाँ एक विशेष प्रतिमा छ - एउटा सानो पाम।
अन्य तुलनामा युरोपेली क्यापिटल अझै पनि हेलसिन्की धेरै युवा। तर, यसको इतिहास फिर्ता जान्छ 450 वर्ष। हेलसिन्की शहर संग्रहालय, सीनेट वर्ग मा स्थित, धेरै रोचक प्रदर्शन र कागजातहरू फिनिस राजधानी को उद्भव र विकास गर्न सम्बन्धित धारण।
तपाईं प्रदर्शनी "हेलसिन्की क्षितिज" भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। शहर को प्रदर्शनी इतिहासको फिनिस आयोजकहरु तीन चरणहरु विभाजित थियो - स्वीडेन को डोमिनियन, को सोभियत संघ र स्वतन्त्रता को एक भाग बसोबास। यो संग्रहालय द्वारा छन् एघार शाखा शहर भर छरिएका छन् कि संग्रहालय।
यो सुरम्य शहर मा धेरै हेलसिन्की बासिन्दा र आगंतुकों खर्च गर्न चाहनुहुन्छ। Seurasaari द्वीप को मुख्य भूमि शहर footbridge संग जोडिएको छ। यहाँ, खुला हावामा देश को प्रान्तीय विगतमा प्रस्तुत जो एक रोचक संग्रहालय छ।
अधिक फिनल्याण्ड सम्पूर्ण यहाँ outbuildings, घरहरू, वायुघट्टहरू, Stables, एक सना र पनि पुरानो चर्च ल्याइयो। reindeer खाल बनेको पाल पनि छ। प्राचीन समयमा तिनीहरूले फिनिस reindeer बस्थे। यो अद्भुत टापुमा vacationers सबै देश भर देखि आउनुहोस्। त्यहाँ गीतहरू र नृत्य संग पर्वहरू छन्। दुलही र दुलहा पुरानो काठ चर्च मा विवाह गर्न आउनुहोस्। यहाँ, क्याफे र रेस्टुरा, स्थानीय भोजन गर्दछ जो।
सबैभन्दा पर्यटकहरु लाग्छ फिनिश राजधानी भनेर - एउटा अचम्मको शहर, रोचक स्मारक को पूरा। सबैलाई उहाँलाई रोचक हुनेछ जो संग्रहालय, चयन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं पहिलो पटक शहर भ्रमण भने, शहर संग्रहालय, जहाँ तपाईं शहर को इतिहास संग सम्बन्धित रोचक कागजातहरू थाह प्राप्त गर्न सक्छन् को परिचय सुरु। विशाल प्रभाव डिजाइन संग्रहालय मा पुरानो। Seurasaari को द्वीप मा संग्रहालय मात्र कसरी अतीत मा फिनिस किसान बाँच्न सिक्न सक्दैन, तर पनि प्राकृतिक वातावरण मा आराम गर्न मौका दिनुहुन्छ।
Azov आकर्षण: तस्बिर र ठेगाना
ग्रह मा 14 भन्दा आकर्षक ठाउँ
धमाका ताओ बीच फुकेत समीक्षाएँ। ताओ बीच धमाका गर्न
174 क्षेत्र - चेल्याबिन्स्क क्षेत्र र
मैकार्ति मेलिसा: सफल क्यारियरको बाटो।
Jellied सुँगुर टाउको: को नुस्खा
फोम संग घर कसरी न्यानो? आफ्नो हातले घर वार्मिंग फोम: निर्देशन
गर्भनिरोधक लागि "regulon" को तयारी: डाक्टर र बिरामीको समीक्षा, प्रयोगको लागि निर्देशन
एक हीरा के हो? पत्थर हीरा: सम्पत्ति विवरण
जहाँ विदेश सस्ता छुट्टी? देशहरूमा र लागत को अवलोकन
अस्पताल "Malakhovka": सेवा र प्रशंसापत्र
चलचित्र "1408": समीक्षा, षड्यन्त्र,, अभिनेता र भूमिकाको